Sida loo saxeexo Binance Saxeex Saxiix - Bitcoinxxo
Ku biir Binance
Waxaa jira sababo badan oo lagu barto sida loo qoro Binance. Maaddaama ay tahay is-weydaarsiga adduunka ugu wanaagsan, waxay taageertaa noocyo kala duwan oo loo yaqaan ‘cryptocurrencies’ iyo habab ganacsi oo kala duwan, sidaa darteed waxaad leedahay xulashooyin kala duwan iyo habab badan oo deyn ah.
Faa’iidooyinka Saxeexida Binance
Boqollaal shilimaad kala duwan ah oo aan laga ganacsan karin Kuuriya waa la ganacsan karaa
Waxay taageertaa ganacsiga mustaqbalka, ka hortagga hoos u dhaca
Ganacsiga margin waa la taageerayaa, ganacsiga weyneynta sare waa suurtagal, sidaa darteed soo laabasho sare waa suurtagal
Muga sare ee ganacsiga ayaa dheefshiidi kara mugga ganacsiga sare.
Awood u leh inuu soo saaro dakhliga dulsaarka oo ah shey dhigaal ah (staking)
Nidaamka xasilloonida – dib-u-dhac la’aan. Ha joojin – Is-weydaarsiga guryaha ayaa qarxa maalin kasta …
Ujrooyin hoose – Ujrooyin hoose marka la barbar dhigo is-weydaarsiga gudaha
Qiimo dhimis kala duwan ayaa la bixiyaa markaad leedahay BNB kuu gaar ah (Binance Coin)
Xaraashka wax kala iibsiga waa suurtagal – Macaamil Garqaad macquul ah iyadoo la adeegsanayo lacagta Korea
Waad iska qori kartaa Binance adoo adeegsanaya emaylkaaga iyo lambarkaaga moobaylka.
Waad iska qori kartaa foomka aad doorbideyso. Qof kastaa wuxuu u maleynayaa inuu leeyahay habka uu doorbido.
Kadib markaad gasho emaylkaaga iyo lambarkaaga sirta ah, guji ‘Abuur Koonto’.
Haddii aad raacdo xiriirka kore, shaashadda isqorista ayaa soo muuqan doonta.
Waxaad kala dooran kartaa inaad isku diiwaan geliso emayl ama taleefan.
Maaddaama dadka badankood ay doorbidaan inay iska diiwaangeliyaan emayl, waxaan si kooban u sharxi doonaa saxiixa taleefanka gacanta.
Haddii aad doorato Mobilka dusha sare oo aad geliso macluumaadka loo baahan yahay, lambar xaqiijin ayaa loo diri doonaa lambarka taleefankaaga gacanta.
Oo dooro Kuuriya 82 lambarka waddanka oo geli lambarka taleefanka gacanta 10XXXXXXXXX, adigoo ka tagaya hoggaamiyaha 0.
Furaha sirta ahi waa inuu ahaadaa isku darka ugu yaraan 8 xaraf, ugu yaraan 1 xaraf Ingiriis weyn, iyo ugu yaraan 1 xaraf yar.
Si loo helo Qiima dhimista Lacagta Binance, waa inaad gashaa nambarka qiimo dhimista ee qaybta Aqoonsiga Gudbinta. Haddii aad raacdo xiriirka, si otomaatig ah ayaa loo galayaa.
Qiimo dhimis 20% ah oo ku saabsan khidmadaha macaamil ganacsi ayaa lagu dabaqi karaa iyada oo aan la xadidin waqtiga.
Kadib, laga bilaabo hadda, waxaan si faahfaahsan u sharxi doonaa sida loo qoro adoo adeegsanaya emayl.
Xullo cinwaanka iimaylkaaga geeska bidix ee kore, qor cinwaanka emaylkaaga, lambarkaaga sirta ah, iyo lambarka sicir-dhimista khidmadda oo guji Abuur Koonto.
Waqtigaan, erayga sirta ah wuxuu ubaahanyahay uguyaraan 8 xaraf, uguyaraan 1 xaraf ingiriis ah, iyo ugu yaraan 1 xaraf yar.
Oo waxaad u baahan tahay inaad gasho nambarka sicir-dhimista si aad u hesho qiimo-dhimis 10% ah oo ku saabsan khidmadaha macaamilka. Haddii aad raacdo xiriirka, si otomaatig ah ayaa loo galayaa, markaa uma baahnid inaad si gooni ah u geliso.
sicir-dhimista ayaa ah XPC9ZLH6 waa.
Guji “Abuur Xisaab” xagga hoose si aad u muujiso xujada.
Waa inaad sameysaa xujo si aad u sameyso xaqiijin sugan si aad uga hortagto saxeexyada otomatiga ama spammy-ka ah.
Fadlan qor nambarka xaqiijinta 6-lambar ee e-maylka laguu soo diray. Koodhku wuxuu shaqeynayaa 30 daqiiqo.
Gali lambarka xaqiijinta 6-lambar ee e-maylka laguu soo diro adiga oo ku jira shaashadda xaqiijinta koontada si aad u dhammaystirto diiwaangelinta.
Ka dib markaad geliso lambarka xaqiijinta, shaashadda hambalyada is-qorista ayaa si toos ah u muuqata. Guji ‘Tag Dashboard’ geeska midig ee kore.
Haddii aad gashay meel qaldan, waxaad u dhaqaaqi kartaa dashboardka adoo dul wareegaya jiirka dusha sare ee astaanta qofka ee geeska kore ee midig.
Haddii aad si qalad ah u soo gasho, bar banner ayaa soo muuqan doona markaad jiirkaaga dul dhigto astaanta qofka ee midigta kore. Waxaad aadi kartaa dashboardka adiga oo gujinaya cinwaanka e-maylkaaga.
Markaad aaddo shaashadda, shaashadda soo socota ayaa soo muuqata.
Xaqiijinta 2FA Waa lagama maarmaan maxaa yeelay waxaad la bixi kartaa lacag kaliya markaad dhammaystirto mid ka mid ah laba xaqiijin: xaqiijinta taleefanka gacanta iyo xaqiijinta Google OTP. Labadaba waad sameyn kartaa.
Haddii aad marka hore doorato Xaqiijinta Taleefanka, shaashadda kore ayaa soo muuqan doonta. Haddii aad gujiso lambarka waddanka oo aad hoos u dhacdo, waxaad dooran kartaa Koonfurta Kuuriya. Lambarka waddanka ee Kuuriya waa 82.
Lambarka taleefanka gacanta, ka tag hogaaminta 0 oo gal 10 lambar. Haddii aad gujiso dir Koodhka lambarrada xaqiijinta sms ee soo socda, lambar xaqiijin ayaa loo diri doonaa taleefankaaga Gali.
Haddii aad gujiso dir Code ee lambarka xaqiijinta emaylka, lambar xaqiijin ayaa loo diri doonaa emaylkaaga. Gali labada lambar ee xaqiijinta sms-ka iyo e-mayl xaqiijinta lambarka oo riix gudbi si aad u dhammaystirto xaqiijinta 2FA ugu dambayntiina waad iskaga bixi kartaa.
Haddii aad sameysay xaqiijinta taleefanka, uma baahnid inaad sameyso xaqiijinta Google. Si kastaba ha noqotee, haddii aad rabto inaad isticmaasho Google Authenticator, xulo aqoonsiga Google si aad u sii wado. Waad xaqiijin kartaa labadaba taleefanka iyo Google Authenticator, ama waad xaqiijin kartaa mid keliya.
Xaqiijiyeha Google waxaa lagala soo bixi karaa Apple App Store ama Google Play oo lagu rakibi karaa taleefankaaga ama kiniinkaaga. Kaliya ka raadi Google Authenticator App Store.
Ka dib markaad ku rakibto Google Authenticator taleefankaaga ama kiniinkaaga, taabo Next oo ku sii wado tallaabada 2.
Tag Google Authenticator-ka lagu rakibay taleefankaaga casriga ah oo guji + geeska midig ee hoose si aad u furto sawirka QR Markaad taleefankaaga ku baarto calaamadda QR, Binance Exchange wuxuu si otomaatig ah uga diiwaangashan yahay OTP.
Lambarka oo ka kooban 6 lambar ayaa loo isticmaali doonaa lambar sugnaan amni oo ku saabsan isweydaarsiga iyo ka bixitaanka mustaqbalka. Diiwaangelinta ka dib, guji Next tallaabada 2.
Tallaabada 3 aad ayey muhiim u tahay. Waxaa lagugula talinayaa inaad duubto oo keydiso furaha keydka meel. Luminta furaha keydku waa daal.
Haddii taleefankaagu jabo ama taleefankaaga kaa lumo, waxaad ku soo celin kartaa Google Authenticator furaha keydka. Haddii aad lumiso ama aadan aqoon furaha keydka, waa wax aad u xanaaq badan maxaa yeelay dib ayaa loo cusbooneysiin karaa iyadoo la marayo nidaamka xaqiijinta aqoonsiga ee ku saabsan Isweydaarsiga Binance.
Tallaabada 4-aad ee ugu dambeysa, riix dir Code, geli lambarka xaqiijinta ee laguugu soo diray emaylka, oo geli lambarka xaqiijinta 6-lambar ee Google Authenticator oo soo gudbi, waadna dhammaysay
Habka Xaqiijinta Aqoonsiga Binance, Kordhi Xadka Ka Noqoshada
Markaad isqorto, hadda waxaad diyaar u tahay inaad ganacsato, laakiin waxaa jira xadka bixitaanka. Waad ka noqon kartaa 2 BTC maalintii iyo 2 Bitcoins maalintii. Qiimaha maanta, waxay u badan tahay inuu yahay $ 500,000.
Lacagta kale sida Ethereum iyo Ripple, xadka ka bixitaanka maalinlaha ah waxaa lagu dejiyay qiimaha 2 bitcoins.
Kadib, haddii aad rabto inaad kordhiso xadka ka bixitaanka, waxaad u baahan tahay inaad xaqiijiso aqoonsigaaga, taasi waa, KYC. Haddii aad xaqiijiso aqoonsigaaga, xaddiga ka-noqoshada maalinlaha ah waxaa loo kordhin doonaa 100 BTC. Waxay noqon laheyd kudhowaad 25 bilyan oo Korean Won. Qudhaanjada caadiga ah ayaa buux dhaafisay.
Haddii aadan u baahnayn inaad ka baxdo wax ka badan 2 qaybood maalintii, uma baahnid inaad xaqiijiso aqoonsigaaga. 50,000 oo maalinti guuleystey maahan qadar yar. Aynu si dhow u eegno sida loo xaqiijiyo Binance KYC.
Shaashadda is-weydaarsiga, guji Settings batoonka bidix oo geli macluumaadka aasaasiga ah ee hoose. Tag Macluumaadka Aasaasiga ah oo dhagsii badhanka Xaqiijinta bidix ee Macluumaadka Shakhsiyeed si aad u gasho.
Haddii aad xulato Kuuriya sida waddanka oo aad gujiso Start, shaashadda xaqiijinta aqoonsiga ayaa muuqata. Ku qor magacaaga Ingiriisiga iyo cinwaankaaga Ingiriisiga shaashadda sugida.
Waad ka tagi kartaa magaca dhexe magaca koowaad oo waxaad geli kartaa kaliya magaca hore iyo kan dambe. Waa inaad dejiso taariikhda dhalashadaada oo aad gashaa cinwaanka soo socda ee Ingiriisiga. Waa culeys.
Cinwaanka Ingiriisiga waxaa loo beddelay cinwaan Ingiriis ah iyadoo la adeegsanayo beddelka cinwaanka Naver ee Ingiriisiga. Haddii aad ku qorto cinwaanka cinwaanka Ingiriisiga ee ‘Naver’, way muuqan doontaa. Ka dib markaad geliso dhammaan macluumaadka oo aad gudbiso, shaashadda xaqiijinta aqoonsiga ayaa soo muuqata.
Aqoonsiga horumarsan, waxaad ka dooran kartaa baasaboor, laysanka darawalnimada, ama kaarka aqoonsiga (kaarka diiwaangelinta deganaha). Xullo midka kugu habboon adiga oo guji Sii wad.
Laysinka darawalnimada iyo kaararka aqoonsiga, labada hore iyo gadaalba waa in la sawiro oo la soo raro. Waa inaad si cad u soo baxdid si aan laguu garaacin. Baasaboorrada, waa inaad sawir ka qaadatid shaashadda astaantaada muuqaalka oo aad gelisaa.
Dhagsii Ku sii wad si aad u xaqiijiso sawirkaaga.
Tallaabada xigta waa inaad ku dhejiso sawirkaaga. Waxay kaloo noqon kartaa aqoonsi sawir ah. Fadlan ha xidhin koofiyad ama muraayado, ku dheji sawir cad oo ah naftaada iftiin dhalaalaya riixna sii wad.
Hadda, wajiga aqoonsigaaga ama baasaboorkaaga waa in la hubiyaa si loo arko haddii wejiga sawir-qaadaha ama sawirka aqoonsiga ee aad hadda dhejisey isku-aadhka. Haddii aad gujiso Start Certification, baaritaanka wuu socdaa natiijada baaritaanka waxaa lagu ogeysiinayaa emayl.
Telefoonka gacanta wuxuu adeegsadaa xaqiijinta iyo QR code-ka hoose waa la isticmaali karaa marka la iska diiwaangelinayo barnaamijka moobiilka.
Dhamaan howlaha shahaadeynta waa in lagu dhammeeyaa 15 daqiiqo gudahood, haddii ay ka badnaato 15 daqiiqo, waa inaad dib u bilowdaa.
Hal koonto ayaa la aqoonsan karaa 10 jeer maalintii. Haddii aad ku guuldareysato wax ka badan 10 jeer, dib ayaad u xaqiijin kartaa 24 saac kadib.
Qeybta xigta, waxaan si faahfaahsan ugu sharxi doonnaa sida loo diiwaangeliyo iyadoo la adeegsanayo barnaamijka mobilada ee Binance. Kuwa aan marin u helin kombuyutarka waxay iska diiwaan gelin karaan taleefan casri ah.
Categories Sida loo diiwaan geliyo Binance Tags binance api, Binance Seeraar, Bixinta kaarka Binance, Debaajiga Binance, Hababka Ganacsi ee loo yaqaan 'Binance Margin Trading', Kediska Binance Margin, Khidmadaha Binance, Khidmadaha Mustaqbalka Binance, Ku biir Binance, Ku biir Binance, Saxiix Binance, Shaxda Binance, Sida Loo Ganacsado Mustaqbalka Binance, Xakamaynta Binance Post navigation